जानी राखाै : मधुमेह राेगीहरूले खानै पर्ने १० फलफुलहरु – « Naya Bato
जानी राखाै : मधुमेह राेगीहरूले खानै पर्ने १० फलफुलहरु –
मधुमेह अर्थात डाइबेटिजलाई सामान्य भाषामा चिनी रोग भन्ने गरिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज ग्रन्थिबाट उत्पादन हुने इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितताका कारण मधुमेह हुन जान्छ । इन्सुलिनले चिनी अर्थात कार्बोहाइड्रेटलाई पचाउने काम गर्छ र रगतमा यसको मात्रा सन्तुलित र नियमित गर्ने गर्छ । – जब इन्सुलीनको उत्पादन हुन छाड्छ रगतमा चिनीको मात्रा बढ्न थाल्छ । प्यांक्रियाजले प्रयाप्त इन्सुलीन उत्पादन नगर्दा वा शरिरले इन्सुलीनको उपयोग गर्न नसक्दा मधुमेह हुनजान्छ । यी हुन् मधुमेह नियन्त्रण गर्ने १० खाद्य पदार्थहरु।
ताइवानको एक विश्वविद्यालयकाे अध्ययनले अम्बा रगतमा चीनीकाे मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्ने तथ्य फेला परेको छ। साथै अम्वामा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रमा पाइने गर्दछ ।
अभोकाडोमा monounsaturated बोसो भरिएको फल हाे । यसले खाना पचाउनुकाे साथै मधुमेह नियन्त्रण गर्न मदत गर्दछ ।
अालस प्रोटिन, फाइबर तथा म्याग्नेसियमले भरिपूर्ण श्राेत हाे । म्याग्नेसियमले सरिरमा इन्सुलीनकाे मात्रा नियन्त्रण गर्नुका साथै यसमा metabolise नामक खनीज रहेकाे हुन्छ। यसले पनि मधुमेह नियन्त्रण गर्न मदत गर्ने अनुसन्धानबाट देखिएकाे छ ।
४. बदामकाे घिउ
हालै मात्र एउटा अध्ययनका अनुसार बदामकाे घिउ पनि मधुमेह राेगिहरूका लागि निकै फलदायी हुने देखाएकाे छ ।
५. म्य़ाङ्गो स्टिम
याे फल नेपाल लगायत भारत र फिलिपिन्समा फल्ने एक ट्रपिकल फल हो । याे फलकाे प्रयाेगले मधुमेह नियन्त्रण गर्नुका साथै माेटाेपन समेत कम गर्ने अनुसन्धानले देखाएकाे छ ।
भनिन्छ दैनिक स्याृउ खानाले डाक्टरकहाँ जानै पर्दैन । याे फल बिभिन्न भिटामिन यूक्त हुन्छ । याे फल मधुमेह राेगीहरूका लागी निकै फलदायी सावित हुन्छ ।
अन्डामा प्रोटिन एमिनो एसिड लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण तत्व हरूले भरीपूर्ण हुन्छ । मधुमेह रागीका लागी अन्डा प्रयाेग फार्इदाजनक रहेकाे छ ।
मधुमेह रागीहरूका लागी माछा सेवन निकै फार्इदाजनक रहेकाे छ । माछामा पार्इने फैटी एसिड नामक तत्वले संग इन्सुलिन प्रतिरोध गर्ने क्षमता हुनुका साथै शरीर मा सुनिंनु कम गर्ने , हृदय रोग नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
हाम्राे भान्सामा प्रयाेगमा अाइरहने ब्रोकाउलीकाे सेवन निकै फार्इदाजनक रहेकाे छ । यसमा भिटामिन सी को भन्डार नै हुन्छ । यसकाे प्रयाेगले मधुमेह नियन्त्रणका साथै शरिरका नसाहरु र धमनिहरु मा सुरक्षित रक्त प्रवाह गर्ने गर्दछ ।
जौ पनि क्रोमियम, म्याग्नेसियम र भिटामिन बी ए भरीपूर्ण खाध्य पदार्थ हाे । यसकाे प्रयाेगले मधुमेह राेगीका लागी निकै नै लाभदायी रहेकाे तथ्य फेला परेकाे छ ।